Ingiriiska oo Cunaqabateyn Kusoo Rogay Dad ku Eedeysan Ku Lug Lahaanshaha Dilkii Khaashuqji | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Ingiriiska oo Cunaqabateyn Kusoo Rogay Dad ku Eedeysan Ku Lug Lahaanshaha Dilkii...
Ingiriiska oo Cunaqabateyn Kusoo Rogay Dad ku Eedeysan Ku Lug Lahaanshaha Dilkii Khaashuqji
Wasiirka Arrimaha dibadda Ingiriiska Domic Raab, ayaa ku dhawaaqay in ay cunaqabateyn ku soo rogeen dad uu sheegay in ay ku eedeysanyihiin godob ay ka galeen xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan dad magac ku leh Sucuudiga oo ku eedeysan ku lug lahaanshaha dilkii wariye Jamaal Khaashuqji.
Wasaaradda ayaa sheegtay in dadka ay cunaqabataynta ku soo rogtay uu ka mid yahay Sacuud al-Qaxdaani oo ahaa diiwaan-hayaha boqortooyada oo ay sheegtay in uu ahaa ninka qorsheeyay dilka isaga oo kaashanaya 15 qof oo kale.
Wasiirka ayaa sheegay in cunaqabatayntani ay gabi ahaanba joojinayso dhaq-dhaqaaqii dhaqaale ee dadkaasi ay ku lahaayeen Ingiriiska, sidoo kalena aanay soo geli Karin Britain.
Cunaqabataynta Ingiriiska ayaa lagu soo rogay 20 qof oo Sacuudiyaan ah 25 qof oo Ruush ah, laba sargaal oo reer Mayanmaar ah iyo laba hay’adood oo laga leeyahay Kuuriyada Waqooyi oo dhammaantood qeyb ka ahaa dilka iyo raad-gadidda khaarijintii Jamaal Khaashuqji 2018-kii.
Ragga Sacuudiyaanka ah ee diiwaanka cunaqabataynta Ingiriiska galay waxaa ugu caansan Sacuud al-Qaxdaani oo ahaa diiwaan-hayihii hore boqortooyada iyo Axmed Casiiri ku xigeenkii hore ee laanta sirdoonka iyo saraakiil kale oo ka tirsan sirdoonka Sacuudiga.
Previous articleAqalka Sare oo qaadacay afarta xeer ee qabyo tirka u ahaa sharciga doorashooyinka Qaranka
Next articleGuddoomiye Mursal Oo Kulan La Qaatay Safiirka Somalia Ee Qatar